वि.सं. २०७५ भाद्र २७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस - pnpkhabar.com
You are at:Home»राशिफल»वि.सं. २०७५ भाद्र २७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस
वि.सं. २०७५ भाद्र २७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस
By शर्मिला गुरुङ on २७ भाद्र २०७५, बुधबार ००:३० राशिफल
वि.सं. २०७५ भाद्र २७ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर १२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:४७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:१२ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:३९ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:०३ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:५२ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:१७ बजे, भाद्रपद शुक्लपक्षको तृतीया तिथि, साँझ ०६:४८ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्थी तिथि, चित्रा नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि ०४:५० बजेसम्म, त्यसपछि स्वाती नक्षत्र, चन्द्रमा कन्या राशिमा, साँझ ०४:५९ बजेसम्म, त्यसपछि तुला राशिमा, शुक्ल योग, बिहान ०८:४८ बजेसम्म, त्यसपछि ब्रह्म योग,
तैतिल करण, साँझ ०६:४८ बजेसम्म त्यसपछि गर करण, आनन्दादि योग : कालदण्ड, चन्द्रवर्ण : कालो, चन्द्रदिशा : दक्षिण, योगिनीदिशा : आग्नेय, वारशूल : उत्तर, आजको चाडपर्व र उत्सव : हरितालिका व्रत, तीज, मन्वादि, चन्द्रदर्शन दोष, चथा, आजको मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), अग्निवास(होमादि), वस्त्राभरण(गुन्युचोलो), घर छाउने÷ढलान गर्ने, डेरा सर्ने,
काममा कडा रुपमा प्रशस्तुत हुनु होला झिना मसिना समस्या समाधान भएर जानेछन् । परिश्रमको फल राम्रो मिल्नेछ । आत्मबल र आत्म विश्वास बढ्नेछ । व्यापार बढ्नेछ । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ ।
पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । अन्योलमा नपरि काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । काम काजमा सामान्य समस्या आउने देखिन्छ,प्रयत्न गरेमा सफल हुनुहुनेछ । विवाद पर्न सक्छ ।
पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् । भौतिक सम्पतिमा विवाद पर्न सक्छ । खर्च बढ्नेछ । शारीरिक शिथिलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । शंका उपशंका बढ्नेछ ।
सामान्यतया आजको दिन पनि अनुकुल नै देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । पढाई लेखाई तिर भन्दा कमाई तिर मन दौडिने छ । आर्थिक कारोवारमा चनाखो रहनु होला ।
समयले थोरै साथ दिनेछ कुनै काम सम्पन्न गर्नुछ भने प्रयास बढि गर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ । परिवारमा सुख शान्ति मिल्नेछ । आम्दानीका मार्ग भन्दा खर्चका मार्ग बढि हुनेछन् ।
शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । खर्च नियन्त्रणमा जोड दिनु होला । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय बढ्ला ।
घरका समस्यासँग बढि परिचित हुनु पर्ला । आर्थिक कारोवार विग्रिन सक्छ सचेत नभएको खण्डमा । आम्दानीका मार्ग खुम्चिने छन् । खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउने छ ।
काम गरे अनुुसारको प्रतिफल पाउन कठिनाई हुने छैन । उद्योग,धन्दा बन्द व्यापारमा प्रगति हुनेछ । आम्दानी खर्चको व्यवस्थापनमा बढि ध्यान दिनु पर्नेछ । घर परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ ।
काममा सरलता आउनेछ । अधुरा अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । तपाईको कामबाट अरु पनि प्रभावित हुनेछन् । गएका ठाँउमा मान सम्मान पाईनेछ । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
मानसिक चिन्ता घट्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ । हिजो विमुख भएका आज सोझिएर आउने छन् । अनावस्यक काममा समय र धन खर्च हुनेछ ।
काम गर्ने वातावरण विग्रिनेछ । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा लिन सकिने छैन । खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । विश्वासको त्यान्द्रो चुडिन सक्छ । निराशा बढ्नेछ ।
समयको सदुपयोग गर्नु होला । लगनशिल भई गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । कार्य क्षमता घट्ने छैन । बैदेशिक कार्य सफल हुने देखिन्छ । जीवन साथिबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापारबाट थोरै आम्दानी हुनेछ ।